Njikere nchịkọta ụyọkọ na Microsoft Excel
Otu n'ime ngwaọrụ iji dozie nsogbu akụ na ụba bụ nchịkọta ụyọkọ. Na ya, ụyọkọ na ihe ndị ọzọ nke usoro data dị iche iche dị iche iche. Usoro a nwere ike iji Excel. Ka anyị lee otú e si eme nke a na omume. Iji nchịkọta ụyọkọ na nchịkọta ụyọkọ, ị nwere ike mepụta ihe atụ nke àgwà a na-amụ.
Bugharịa ahịrị na Microsoft Excel
Na-arụ ọrụ n'ime Excel, mgbe ụfọdụ ị ga-eche ihu na ọ dị mkpa ka ịwapụ usoro na ebe. E nwere ụzọ dị iche iche a nwapụtara maka nke a. Ụfọdụ n'ime ha na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ nkịtị na ntinye pịa, ebe ndị ọzọ chọrọ oge dị ukwuu maka usoro a. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara ihe ndị a nile, ya mere, ha na-etinye oge dị ukwuu na usoro ndị ahụ a ga-eme ngwa ngwa n'ụzọ ndị ọzọ.
Ịmepụta histogram na Microsoft Excel
Historyogram bụ ngwá ọrụ nyocha nke ọma. Nke a bụ eserese ngosi nke ị nwere ike ịchọta ọnọdụ zuru oke, ozugbo ị na-ele ya anya, na-enweghị na-amụ ihe ederede na tebụl. Na Microsoft Excel, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị e mere iji wuo usoro ihe omimi nke ụdị dị iche iche.
Iji taa na Microsoft Excel
Otu n'ime atụmatụ ndị dị mma nke Microsoft Excel bụ taa. Site na onye ọrụ a, ụbọchị nke ugbu a abanyela n'ime sel. Ma enwere ike itinye ya n'ọrụ na usoro ndị ọzọ na mgbagwoju anya. Tụlee atụmatụ ndị dị mkpa nke ọrụ taa, nuances nke ọrụ na mmekọrịta ya na ndị ọrụ ndị ọzọ. Onye ọrụ na - eji taa TAA ọrụ taa na - egosiputa ụbọchị edebere na kọmpụta ahụ na cell ahụ akọwapụtara.
Mmemme Microsoft Excel: tinye pasent na nọmba
N'oge nchịkọta, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji tinye percentages na nọmba ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, iji chọpụta uru uru ugbu a, nke mụbara site na pasent ụfọdụ tụnyere ọnwa gara aga, ịkwesịrị ịgbakwunye pasent a na ego nke uru nke ọnwa gara aga. E nwere ọtụtụ ihe atụ ndị ọzọ ebe ịchọrọ ime ihe yiri ya.
Weghachite data sitere na Microsoft Excel na ụdị DBF
DBF bụ usoro a na-ewu ewu maka ịchekwa ma gbanwee data n'etiti mmemme dị iche iche, na isi, n'etiti ngwa ndị na-arụ ọrụ data na akwụkwọ ntanetị. Ọ bụ ezie na ọ dịbeghị anya, ọ nọgidere na-achọ n'ọtụtụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mmemme mmemme na-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike na ya, ndị ọchịchị na ndị isi obodo na-enweta akụkụ dị oke mkpa nke akụkọ na usoro a.
Gbanye Sel na Microsoft Excel
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl, ndị ọrụ mkpa ịgbanwe nha mkpụrụ ndụ. Mgbe ụfọdụ, data adịghị adaba n'ime ihe dị ugbu a ma ha ga-agbasawanye. Ọtụtụ mgbe, enwerekwa ọnọdụ ọzọ, iji chekwaa ohere ọrụ na mpempe akwụkwọ ma hụ na ọnụ ọgụgụ nke ntinye ihe ọmụma, ọ chọrọ iji belata mkpụrụ ndụ.
Kwado elu eletrik dị na Microsoft Excel
Onye ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ na Excel, n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ emesịa zute ọnọdụ ebe ọdịnaya nke cell adịghị adaba na ala ya. N'okwu a, e nwere ọtụtụ ụzọ si ọnọdụ a: iji belata ogo ọdịnaya ahụ; gbakwunyere usoro nke di; gbasaa obosara nke mkpụrụ ndụ; gbasaa elu ha.
Gbanwee nọmba gaa ederede na azụ Microsoft Excel
Otu n'ime ọrụ ndị na-emekarị nke ndị ọrụ nke Excel na-eche ihu bụ ntụgharịgharị nke okwu ọnụ ọgụgụ na ntinye ederede na ntụgharị ihu. Ajụjụ a na-emekarị ka ị nọrọ ọtụtụ oge na mkpebi ahụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị ihe omume algorithm doro anya. Ka anyị hụ otu esi edozi ma nsogbu dị iche iche.
Wepu sel efu na Microsoft Excel
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Excel, ọ nwere ike ịdị mkpa iji kpochapụ mkpụrụ ndụ efu. Ha na-abụkarị ihe na-adịghị mkpa ma na-eme ka usoro nchịkọta data zuru ezu, kama ịkọwa onye ọrụ. Anyị na-akọwa ụzọ iji wepu ihe efu n'efu. Nwepu Algọridim Nke mbụ, ịkwesịrị ịghọta, ọ ga-ekwe omume ịmepụ mkpụrụ ndụ efu na otu ma ọ bụ tebụl?
Na-agụta ego na eserese nke tebụl na Microsoft Excel
Mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl, ọ na-adịkarị mkpa iji kpochapụ ọnụ ọgụgụ maka aha aha. Aha a nwere ike ịbụ aha onye ogbo, aha ikpeazụ nke onye ọrụ, ngalaba ngalaba, ụbọchị, wdg. Ọtụtụ mgbe, aha ndị a bụ isi nke ụdọ ahụ, ya mere, iji gbakọọ ngụkọta maka ihe ọ bụla, ọ dị mkpa iji dozie ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ nke otu ahịrị.
Chọọ na Microsoft Excel
Na akwụkwọ Microsoft Excel, nke gụnyere ọtụtụ mpaghara, ọ na-achọkarị ịchọta ụfọdụ data, aha aha, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe na-adịghị mma mgbe ị ghaghị ilele ọtụtụ ọnụọgụ iji chọpụta okwu ma ọ bụ nkwupụta ziri ezi. Chekwa oge na akwara ga-enyere aka na Microsoft Excel.
Ntugharị PDF nke Excel
Usoro PDF bụ otu n'ime usoro akwukwo kachasị ewu ewu maka ịgụ na mbipụta. Ọzọkwa, enwere ike iji ya mee ihe na-enweghị ike igbanwe. Ya mere, ajụjụ ahụ bụ ntụgharị nke faịlụ nke usoro ndị ọzọ na PDF. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi sụgharịa spreadsheet a maara nke ọma na PDF.
Ịmepụta njikọ na Microsoft Excel
Njikọ - otu n'ime ngwaọrụ ndị ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ na Microsoft Excel. Ha bụ akụkụ dị mkpa nke usoro eji eme ihe n'usoro ihe omume ahụ. A na-eji ụfọdụ n'ime ha gaa akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna ihe onwunwe na Intanet. Ka anyị chọpụta otu esi emepụta ụdị okwu dị iche iche dị na Excel. Ịmepụta ụdị njikọ dịgasị iche iche Ozugbo ekwesịrị ịdebe na a ga-ekewa okwu niile na-ezo aka n'ime ụzọ abụọ: a chọrọ maka nyocha dịka akụkụ nke usoro, ọrụ, ngwaọrụ ndị ọzọ ma jiri ya gaa ihe a kapịrị ọnụ.
Ịgafe sel dị na ibe na Microsoft Excel
Ọ dị mkpa ka ịwapu sel na ibe ọ bụla mgbe ị na-arụ ọrụ na spreadsheet Microsoft Excel bụ obere ihe. Ka o sina dị, ọnọdụ dị otú a bụ na ọ dị ha mkpa ka a kpọọ ha. Ka anyị chọpụta ụzọ ndị ị nwere ike isiwaa sel na Excel. Mkpụrụ na-efegharị O di nwute, na ihe eji enyere gi aka, enweghị ọrụ dị otú a, na-enweghị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ na-enweghị ịgbanwe ntụgharị ahụ, nwere ike ịgbanwe sel abụọ.
10 ọrụ a ma ama nke oge na oge na Microsoft Excel
Otu n'ime ìgwè ndị na-ewu ewu karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl Excel bụ ọrụ ụbọchị na oge. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịme ihe dịgasị iche na data oge. A na-etinye oge na oge na atụmatụ nke ihe omume dị iche iche na Excel. Ịhazi data dị otú ahụ bụ ọrụ bụ isi nke ndị ọrụ n'elu.
Tinye otu kọlụm na Microsoft Excel
Iji rụọ ọrụ na Microsoft Excel, ihe kacha mkpa bụ ịmụta otú ị ga-esi tinye ahịrị na ogidi n'ime tebụl. Enweghị ikike a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịrụ ọrụ na data tabula. Ka anyị chọpụta otu esi tinye otu kọlụm na Excel. Ihe nkuzi: Otu esi tinye otu kolin na teepu Microsoft Word Ịnyekwa otu kọlụm Na Excel, e nwere ọtụtụ ụzọ ịtinye kọlụm na ibe.
Dee NPV na Microsoft Excel
Onye ọ bụla nke na-etinye aka na ego ma ọ bụ itinye ego n'ọrụ, na-eche ihe dị otú ahụ dị ka uru dị ugbu a ma ọ bụ NPV. Ngosipụta a na-egosipụta arụmọrụ ego nke ihe ọmụmụ a mụtara. Excel nwere ngwaọrụ ndị na-enyere gị aka ịgbakọ ọnụ ahịa a.
Mgbọrọgwụ wepụ na Microsoft Excel
Iwepụ mgbọrọgwụ site na ọnụ ọgụgụ bụ ọrụ ọrụ mgbakọ na mwepụ. A na-eji ya maka nyocha dị iche iche na tebụl. Na Microsoft Excel, enwere ọtụtụ ụzọ isi gbakọọ uru a. Ka anyị lebakwuo anya na nhọrọ dị iche iche iji mejuputa nyocha dị otú ahụ na usoro a.
Ịmepụta kọlụm na Microsoft Excel
Na tebụl nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, ọ bụ ihe na-adịghị mfe ịnyagharịa akwụkwọ. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na okpokoro dị n'ofe ókè nke ihuenyo ihuenyo ahụ, wee hụ aha ederede nke data abanyela, ị ga-enwe ike ịpịgharịa aka na ekpe mgbe niile, wee laghachi n'aka nri ọzọ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Excel 2020